Shazam na-eme ka igwe okwu rụọ ọrụ mgbe niile na Mac anyị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị mechie ngwa | Esi m mac
Ọtụtụ afọ gara aga, mgbe ekwe ntị na-ahapụ anyị ka anyị kpọọ ma ọ bụ zipụ ozi ederede, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọpụta aha abụ, anyị enweghị ihe ọzọ ma ọ bụghị ịmekọ ya. gee ya ntị ugboro ugboro iji nwalee n’onwe anyị ihe egwu a bụ. Ọ dabara nke ọma na mbata nke Shazam, nsogbu a edozila, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-emepe ngwa ahụ na ekele maka njikọ data nke ngwaọrụ anyị, anyị nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa egwu anyị na-ege. Shazam dị ugbu a na nyiwe mkpanaka niile yana nke dị maka PC na Mac, yana dakọtara na Apple Watch na ngwaọrụ nwere gam akporo Wear.
Patrick Wardle, onye bụbu injinia NSA nke zutere Apple na ihe karịrị otu oge iji nye ozi gbasara nkwarụ nchedo nke ọ na-ahụ mgbe niile na OS X, achọpụtala ntụpọ ọhụụ metụtara OS X, mana oge a obughi na sistemu eji aru oru kama ya na ngwa anyi wunye na Mac anyi amata egwu. Anyị na-ekwu maka Shazam, ngwa nke ọbụlagodi na anyị mechie ya, na-aga n'ihu ịmebe igwe okwu, na-edekọ ihe niile na-eme n'akụkụ ya.
Mana dịka osote onye isi oche nke nkwukọrịta James Pearson si kwuo, ọ bụghị nsogbu, kama ọ bụ ọrụ ka oge ọ bụla onye ọrụ ahụ tinye ngwa ahụ n'ọrụ, egbula oge dị ukwuu iji mee ka igwe okwu rụọ ọrụ iji chọpụta abụ ahụ, ebe ọ bụrụ na oge imeghe ya dị nnọọ ogologo, ọ ga-abụ na anyị agaghị enwe oge iji mata ya.
Dabere na Pearson, anyị anaghị ekwu maka okwu nzuzo, ebe ọ bụ na agbanyeghị igwe okwu, ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ ahụ n'oge ọ bụla belụsọ ma ọchọpụtara na ọ bụ abụ. Mana nsogbu a enwere ike iji ndị enyi si n’èzí gbalịa ịbanye malware n’ime ngwa ahụ, dịka o mere n'ọtụtụ oge maka Nzipu, nke onye nọ n’akụkụ nke ọzọ nwere ike ige mkparịta ụka anyị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Shazam na-eme ka igwe okwu rụọ ọrụ mgbe niile na Mac anyị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị mechie ngwa ahụ
nke ahụ bụ ihe mere m ji eji push mic control app ...
Zaghachi Onye ọbọ
Họrọ 15 "Macbook Pro SSD nke amamihe n'ihi na ha anaghị edochi anya
Apple na-ere ire akwụkwọ akpọrọ "Apple mere na California"